Myanmar Literature – Min Thayt
Tag: Myanmar Literature
စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှု၏ နောက်ကွယ်က စာပေတွန်းအားများ
သတင်းမီဒီယာ၏ အခန်းကဏ္ဍ ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့၊ သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက် စာပေ ကင်ပေတိုင်ရဲ့ ဆင်ဆာပေါ်လစီကြောင့် အထွေထွေသင်းသတ်ခံရတဲ့ စာနယ်ဇင်းနယ်ပယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် လည်း သတင်းစာဆရာတွေနဲ့ အယ်ဒီတာတွေဟာ ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှု ပြင်းထန်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကြားထဲ ကပဲ မြန်မာလူထုကို အသိအမြင်နဲ့ အတွေးအခေါ် ပျံ့ပွားအောင် ကျေးဇူးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ စာနယ်ဇင်းနယ်က အရေးအသားတွေကြောင့် ထောင်ကျတန်းကျနဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ်ထောင်ချမှုကိုလည်း၊ ခံခဲ့ကြရပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီး...
Articles Education Perspective Politics
https://www.youtube.com/watch?v=_8kGEJ2fAKo&t=1s ပညာရှင်စရိုက်နဲ့ နိုင်ငံရေးသမားစရိုက် ဘာကွာသလဲဆိုတာ၊ ခဏ ခဏ သရုပ်ခွဲကြည့်မိတယ်။ တချို့ ပညာရှင်အကျင့်အကြံတွေ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့်ပညာရှင်စစ်စစ် ဖြစ်မလာဘူး။ တချို့ နိုင်ငံရေးဝါသနာပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် ပညာရှင်စစ်စစ် ဖြစ်လာတယ်။ နိုင်ငံရေးသမားနဲ့ ပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ မူလဗီဇတွေမှာ၊ ထပ်နေတဲ့ စရိုက်တွေ ရှိလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့နေရာတွေမှာ သွင်သွင်ကွဲပြားတာတွေ့ရတယ်။ အထင်အရှား ကွဲပြားတဲ့အချက် တချို့ကို...
Articles Education Literature Perspective
တန်ဖိုးတွေ အကြောင်း​ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒယ်အိုးဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလရဲ့ “တန်ဖိုး” တရားတော်မှာ၊ “တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိတာ” လို့ ဟောပါတယ်။ တန်ဖိုးသိဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ပါ။ တန်ဖိုးသိဖို့ဆိုတာ ဉာဏ်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဉာဏ်အလုပ်မလုပ်တဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ - တန်ဖိုး အမှန်ကို မသိနိုင်ပါ၊ ဉာဏ်အလုပ်လုပ်ဖို့ ပျင်းတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း ဟာ တန်ဖိုးအမှန်ကို နားမလည်နိုင်ပါ။ ကျနော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ ဘာကို...
▣ မြန်မာစာပေအရေးအသား ကွေ့ကြီး (၄) ကွေ့
လျှောက်ရိုး လျှောက်စဉ်ကို မလျှောက်၊ ဖောက်ပြီး လျှောက်ခဲ့သူတွေဟာ လမ်းသစ်ကို ထွင်ရလို့ ခြုံနွယ်ပိတ်ပေါင်း ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီး လမ်းဖောက်ရတယ်။ လမ်းဖောက်ရင်း လမ်းသစ်လျှောက်ပေမယ့်၊ ရှောရှောရှုရှုတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဆူးခြစ်ခံရတယ်။ ဆူးညှောင့်ခလုတ်ထိုးမိ၊ တိုက်မိတယ်။ သို့သော်လည်း လျှောက်ချင်သူအဖို့ ဖောက်ရင်း လျှောက်တော့ ခရီးပေါက်ခဲ့တာပါပဲ။ • စာရေးတယ်ဆိုတာလည်း သတ္တိအများကြီးလိုတယ်။ အယူအဆတစ်ခု အတွေးအခေါ် တစ်ခုကို ပြောလိုက် တဲ့အခါမှာ...